तपाइको यो साता कस्तो रहला? यी राशिको राम्रो छैन समय, महत्वपूर्ण काम नगर्नु नै बेस! – Ramailo Sandesh
ज्योतिषाचार्य दामोदरनाथ लोहनी। वैशाख १८ देखि २४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल।
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) : यो साता धेरै काम बन्नेछन् । सुरुका दिनमा मनमा अलि–अलि डर लागे पनि खास बिगार हुने देखिन्न । पढाइ एवम् लेखाइ दुवैतिर राम्रो प्रगति हुनेछ । खासगरी प्राविधिकखाले कामबाट मनग्गे आर्थिक आर्जन हुन सक्छ । साहस कत्ति पनि घटेको छैन ।
वृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) : सुरुका दुई दिन त्यति राम्रा छैनन् । त्यसैले शनिबारको दिनमा कुनै महत्वपूर्ण काम नगर्नुमा नै बेस छ । त्यसपछि पनि सामान्य रूपमा सुधार हुँदै आउनेछ । खर्च गर्नेक्रम बढी नै रहला । मद्दत गर्ने मित्रहरू भेट्टाइनाले मात्र समस्या समाधानमा टेवा पुग्ला ।
मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) : मध्यमखालको समय छ । स्वास्थ्य त्यति राम्रो रहने छैन । धैर्य लिन सक्ने शक्ति भएकाले मात्र आत्मबलमा बढोत्तरी होला । व्यापार तथा व्यवसायबाट सीमित लाभमात्र छ । रिस एवम् ईर्ष्या गर्नेको सङ्ख्या बढी हुनाले काममा बाधा आउला। गणेशको दर्शन गरिरहनुहोस् ।
कर्कट राशि – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) : साताको पूर्वार्ध राम्रोखालको छ र केही काम गर्नुपर्ने भए यही समयमा गरिहाल्नुहोस्। बिहीबारको दिन त्यति राम्रो देखिन्न । नभएको ́झन्झट आउन सक्छ । त्यसैले बिहीबार बिहानै शिवजीको दर्शन गर्नुहोस् । शिक्षाको क्षेत्रमा समेत खोजेकोजति प्रगति हुने छैन ।
सिंह राशि – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) : साता त्यति नराम्रो होइन । अलि–अलि बाधा आए पनि त्यसलाई टार्न सकिनेछ । पढाइ र लेखाइ चलिरहला । आफन्तको सहयोग भने त्यति देखिन्न । सानो–सानो कुरामा पनि घरपरिवारमा कचिङ्गल पर्न सक्छ । देवीको दर्शनले त्यसलाई निराकरण गर्न मद्दत पुग्ला ।
कन्या राशि – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) : सुरुका दिनमा स्वास्थ्य बाधा होला । त्यसैले खर्चको क्रम घट्ने छैन । व्यवसायसम्बन्धी काममा भने राम्रै प्रगति हुनेछ । मित्रहरू असलखालका छन् र मद्दत नै दिनेछन् । शिक्षाको क्षेत्रमा चाहेको जति प्रगति हुने देखिन्न । जागिरभन्दा व्यापारको कामबाट बढी फाइदा हुन् सक्छ।
तुला राशि – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) : यो साता हिँडाइ धेरै होलाजस्तो छ । यात्राको सम्भावनासमेत त्यति नै देखिन्छ । तर, वैवाहिक काममा भने बाधा आउला । मायाप्रीतिको बखेडामा लाग्नु हाललाई उचित देखिँदैन । व्यापारको क्षेत्रमा भने नयाँखाले काम तपाईंको हातमा पर्न सक्छ।
वृश्चिक राशि – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) : आर्थिक स्थिति राम्रो रहला । खर्च नघटे पनि बलियो आर्थिक स्रोत भेट्टाइनाले त्यति समस्या पर्ने छैन । स्वास्थ्यस्थिति भने मध्यममात्र छ । खासगरी मङ्गलबारको दिनमा बढी वेगले वाहन नचलाउनुहोस् र बिहानै गणेशको दर्शन गर्नुहोस् ।
धनु राशि – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) : साता राम्रोखालको छ । भोजभतेर प्रशस्त पर्नेछन् । पढाइमा शिथिलता भए पनि लेखाइको क्षेत्रमा भने गतिशीलता नै छ । तपाईंको वाणीमा अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति छ । तर पनि वाणी निकाल्दा संयमित नै हुनुहोस् । सरस्वतीको दर्शन गर्नुमा कल्याण छ ।
मकर राशि – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) : सुरुका दिनमा बढी खर्च होला र मन आत्तिएला । भोजभतेरका लागि नै बढी खर्च गर्नुपर्नेछ । मुद्दामामिला परे पनि तपाईंकै विजय हुने देखिन्छ । जागिरतिर कम रुचि र व्यापारसम्बन्धी काममा बढी लगाव हुनेछ । इष्टमित्रले राम्रै सहयोग दिनेछन् ।
कुम्भ राशि – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) : प्रशस्त मिहिनेत गरिने साता छ । परिश्रमकै भरले धेरै काम बन्नेछन् । यात्राको सम्भावनासमेत देखिन्छ । रिस गर्ने र सहयोग गर्नेको सङ्ख्या बराबरै जस्तो छ । नारायणको नित्य दर्शन गर्नाले हातले समातेको व्यवसायबाट प्रचुर लाभ हुन सक्छ ।
मीन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) : साता नराम्रो होइन । मनमा अलि–अलि डर लागे पनि धेरै काम तपाईंबाट सम्पन्न हुनेछन् । खर्चको मात्रा भने बढी नै होला । मित्र र परिवारको सहयोगले धेरै समस्यालाई समाधान गर्न सकिनेछ । बङ्गलामुखीको सेवाले त्यसलाई हटाउन सकिनेछ ।